Bit By Bit - Intshayelelo - 1.1 An inki kulicima
Ngehlobo lango2009, phones mobile ikhalisa zonke Rwanda liphela. Ukongeza izigidi iminxeba phakathi osapho, abahlobo, kunye nabo ezoshishino, malunga 1,000 balapha wafumana umnxeba ovela uYoshuwa Blumenstock kunye noogxa bakhe. Abaphandi baye bafunda ubutyebi nobuhlwempu ngokuqhuba uphando abantu abaye ngokungakhethiyo kusampulwe ukusuka ledatha 1.5 lezigidi zabathengi kumboneleli mfono Imfono mfono Rwanda leyo inkulu. Blumenstock noogxa bacela nxaxheba ukuba ayefuna ukuba ukuthatha inxaxheba kuphando, wachaza uhlobo lophando kubo, waza wambuza uthotho lwemibuzo malunga neempawu kwawo ngokwedemografi, ezentlalo kunye nezoqoqosho.
Yonke mna ndathi kude kube ngoku yenza esi sandi ngathi uphando kwinzululwazi yoluntu lwemveli. Kodwa, yintoni elandelayo hayi zemveli, ubuncinane ke. Lasebenzisa data uphando yokuqeqesha sokufunda umatshini ukuqikelela ubutyebi umntu ukusuka data zabo umnxeba, kwaye ke isetyenziswe kule modeli ukuqikelela ubutyebi zonke 1.5 lezigidi zabathengi. Okulandelayo, baqikelela indawo ekuhlala kuyo yonke 1.5 lezigidi abathengi ngokusebenzisa ulwazi geographic okulungiswe logs umnxeba. Ukubeka ezi Uqikelelo ezimbini-ubutyebi kuqikelelwa kunye nendawo eliqikelelwayo yokuhlala-Blumenstock kunye nabalingane bakwazi ukuvelisa uqikelelo aphezulu-ngesisombululo emhlabeni ubutyebi Rwanda liphela. Ingakumbi, ababanga nako ukuvelisa ubutyebi kuqikelelwa ngasinye 2.148 iiseli Rwanda ngayo, iyunithi incinane yolawulo elizweni.
Kwakungenakwenzeka ukuba ukungqinisiswa kolu qikelelo kuba akukho namnye wakha wavelisa oluqikelelwayo kwiindawo ezincinane ngeendawo ezifana eRwanda. Kodwa, xa Blumenstock nabalingane oluqinile iingqikelelo zabo kwizithili 30 eRwanda, bafumana ukuba uqikelelo lwabo zazifana uqikelelo ukusuka Demographic and Health Survey, umgangatho igolide iisaveyi kumazwe asaphuhlayo. Nangona ezi ndlela zimbini wavelisa olufanayo kuqikelelo kulo mzekelo, indlela ye Blumenstock kunye noogxa 10 amaxesha ngokukhawuleza kwaye zitshiphu amaxesha 50 ngaphezu Surveys zemveli zosasazeko kunye nezeMpilo. Ezi Uqikelelo iindleko kakhulu ngokukhawuleza ngokuhla sidale amathuba amatsha kubaphandi, oorhulumente, kunye neenkampani (Blumenstock, Cadamuro, and On 2015) .
Ukongeza ekuphuhliseni indlela entsha, olu phando hlobo ngathi Rorschach inkblot uvavanyo; abantu babone ixhomekeke imvelaphi yabo. Izazinzulu ezininzi zentlalo ukubona sisixhobo omtsha womlinganiselo ukuba zingasetyenziswa ukuvavanya neengcamango malunga nophuhliso lwezoqoqosho. Ezininzi izazinzulu data ubona ingxaki entsha cool umatshini yokufunda. Abantu abaninzi ishishini ubone indlela enamandla lokuvula ixabiso kwi data wokulanda yedijithali ukuba sele eziqokelelweyo. Wabathetheli abaninzi zabucala ukubona njengesikhumbuzo eyoyikekayo ukuba siphila kwixesha zokucupha ubunzima. Abenzi nkqubo abaninzi ukubona ngendlela ubuchwepheshe obutsha kunokusinceda ukudala kwihlabathi elingcono. Enyanisweni, olu phando zonke ezo zinto, kwaye yiyo loo nto ke i window kwikamva uphando lwentlalo.